I-Jamarat, iDamarat Bridge - iMecca
Ephakathi Ephakathi I-Saudi Arabia IMecca
Ikheli: Pedestrian Rd & Tunnel 15, Al Mashair, Makkah 24247, Saudi Arabia
Ibhuloho Jamarat eSaudi Arabia inendawo ebalulekile phakathi kwazo zonke izinto zezwe . Lokhu kubangelwa ukubaluleka kwezenkolo, ngoba iJamarat iyindawo engcwele lapho abahambi khona beya eHajj njalo ngonyaka.
I-Jamarat itholakala eMfuleni i-Mina edolobheni lamaSulumane laseSaudi Arabia - eMecca .
Umlando weBridge Bridge
Isiko lasendulo sithi esikhathini esidlule, imboni Ibrahim wadlula lapha. Wambona uLucifer wamphonsa itshe kuye kathathu, kwaze kwaba yilapho uSathane ephika. Ngemva kwalokhu, kunqunywa ukuthi bonke abahamba ngezinyawo badinga ukuchitha amahlumela angu-70 ngezinsuku ezimbalwa, kubandakanya izingcezu ezingu-7 - ngosuku lokuqala namatshe angu-21 ezinsukwini ezintathu ezizayo kuze kube sekupheleni kweHajj. Lo mkhosi uwukubonakaliswa kokunqoba kwesintu phezu kukaSathane.
Ngo-1963, kwenzeka isenzakalo esibucayi eJamarat Bridge: iningi labantu lashona ngesikhathi se-pandemonium. Emva kwalesi sigameko, iziphathimandla zaqala ukuxazulula inkinga yokuthuthukisa umklamo, ukwandisa ibhuloho nokufaka izinhlelo zokungena nokuphuma. I-design entsha ivele ngo-2011. Kodwa-ke, ngokucabangela izidingo ezikhulayo eziqhubekayo eminyakeni ezayo, kuhlelwe ukwandisa ukuguqulwa nokukwazi ukubhekana nabagibeli abayizigidi ezingu-5 ngesikhathi esifanayo.
Yini ethakazelisayo ngeJamarat?
Namuhla i-Jamarat Bridge ibude obuyizingalo ezingu-950 nobubanzi obuyi-80 m. Isakhiwo sihlanganisa ama-5 phansi, iziphakamiso ezingu-11, izakhiwo zokuhlukanisa ezikhethekile ezivimbela ukuhlanganiswa kwenani elikhulu labahambi, kanye nesistimu yokumoya umoya, ngenxa yokuthi ukushisa emgwaqweni kungama-40 ° C I-Jamarate ihlale ikhululekile +29 ° C. Ngokunyakaza mahhala kubhuloho ngehora elilodwa kungadlulela abahamba ngezinkulungwane ezingu-300.
I-oda ngesikhathi sokudabula ibhuloho ihlolwe ngamadivaysi angu-2 ama-surveillance nabasebenzi abangaphezu kuka-1 000 bezokuphepha. Ama-pyloni angu-3, ​​lapho amakholwa aqala ukuphonsa khona amatshe eJamarat Bridge, ahlanganiswe nokuvikelwa kwenjoloba ukugwema ukusika amatshe nokulimaza abahambi.
Kanti naseJamarat Bridge kunezindawo zokudla, izindlu zangasese, amakamelo angokwenkolo kanye nephuzu lokunakekelwa kwezempilo oluphuthumayo.
Ngaphambi kwebhuloho laseJamarat eSaudi Arabia ngesikhathi abahambi bezokuhambela ngezinyawo behamba ngezinyawo ezivela ezindaweni ezahlukene eMecca . Futhi, le ndawo ebalulekile yamaSulumane ingafinyelelwa ngetekisi noma ezokuthutha umphakathi. Kumele kuqashelwe ukuthi abantu bezinye izinkolo abavunyelwe ukuthi bangene eJamarat Bridge noma emzini ongcwele waseMecca.
I-Beach Bar Kochba
I-Beit Guvrin National Park
I-Museum of Biblical Biblical
Mount Mount Zion
Yakha ikhishi - imibono engcono kakhulu yokuhlobisa ingaphakathi lezitezi
Bow of Batun - okuhle nokubi
Umkhosi we-Vernal Equinox
Ukudweba emuva ephansi
Izinwele ze-2013 Zemihla Yonke
Le model nge-defect face defect iye yaphikisa yonke imigodi yobuhle!
Indlela yokukhetha ingubo yomshado njengesibalo?
Ingaphakathi ngesitayela se-shebbie - izimfihlo zokuhlobisa imidwebo yokuvuna
Izandla ezisuka ezihlotsheni ze-sushi
Penguin of uzizwe
Amachashazi amnyama ebusweni
IJeans Yabesifazane 2014
I-Entresol ngezandla zomuntu siqu
Sean Penn no-Shakira